CIYAARAHA CAALAMKA | Ciyaaro Online | Page 30
Home - CIYAARAHA CAALAMKA (page 30)
Barcelona oo waxba yahay ka soo qaadday Sevilla,kuna guuleysatay Dele Rey
kooxda Kubadda Cagta ee Barcelona ayaa hanatay Koobka Boqorka Dalka Spain markii afaraad oo xiriir ah kaddib markii ay xalay 5-0 ku qabatay Kooxda Sevilla oo finalka koobkan u soo baxday. Xiddiggaha Suarez,Messi, Iniesta iyop Coutinho ayaa dhamaantood gaaray shabaqa,waxaana labo gool kkulanka ka dhaliyay Suraez. Barcelona ayaa sidaas ugu dabaal degtay Koobka Boqorka iyada oo todobaadkanna isu diyaarineysa dabaaldegga ...
Man United oo gaartay Finalka FA-Cup
Kooxda Kubadda Cagta ee Man United ayaa iska xaadirsay kama dameysta tartanka FA CUP-ka England kaddib markii ay xalay garaacday Kooxda Tottenham. Kulanka oo ka dhacay Garoonka ay sida kumeel gaarka ah ugu ciyaaarto Tottenham ee Wemplay ayaa waxaa ay ciyaartii ka dhacday ku dhamaatay 2-1 oo ay Man Uited ku badisay. Tottenham ayaa la hormartay Goolka waxaana daqiiqaddii 11aad ...
Mushkiladdii Pepe oo ka sii socota Turkiga,markan casaan ayuu qaatay
Daafaca Reer Portugal ee Pepe ayaa dagaalkii iyo rabshadii uu ku joogay Real Madrid waxaa uu hadda ka wadaa horyaalka Dalka Turkey-ga ee Turkey Supper League. Kulan mar waliba xiiso badan oo dhexmara kooxaha Besiktas iyo Fenerbahce,ayuu xiddiggan taako toos ah kula kacay xiddigga Reer Brazil ee Josef de Souza. Ciyaarta ayaa dhowr jeer la hakiyay markii ay taageerayaasha is fara ...
Madaxweynaha Kooxda Chongqing oo sheegay in uu ku kalsoonyahay saxiixa Iniesta
Madaxweynaha Kooxda Chongqing Dangdai Lifan ee dalka China ayaa xaqiijiyay in uu rajo weyn ka qabo in xagaagan marka uu dhamaado uu Kabtanka Barcelona ku biirayo Horyaalka Dalka China. Ninka maalgeliya Kooxda Chongqing Dangdai Lifan, sidoo kalena Guddoomiyaha ka ah Gong Daxing,ayaa sheegay in uu si weyn ugu kalsoonyahay saxiixa Iniesta oo uu sheegay in uu wax weyn ka beddelayo magaca iyo sumcadda ...
Ian Wright: “Wenger isma casiline waa la eryay”
Xiddiggii hore ee Kooxda Gunners Ian Wright,ayaa ka hadlay sida uu u arko shaqo ka tegista tababaraha uu muddada dheer mucaaridka ku ahaa ee Arsen Wenger kaas oo Jimcihii shaaciyay in uu dhamaadka xagaagan isaga tagayo Arsenal. Ian Wright,waxaa uu rumeysan yahay in warqadda ka soo baxday Arsenal ee lagu shaacinayo shaqo ka tegiska Wenger aysan ahayn mid sax ah,waxaana uu ...
Boca oo xaqiijisay dalabkood Buffan
Tababaraha Kooxda Kubadda Cagta Boca Juniors ,Ninka lagu magacaabo Guillermo Barros Schelotto ayaa xaqiijiyay xiriir ay la sameeyeen goolhayaha duqa ah ee kooxda Juventus, Gigi Buffon. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ay warbaahinta Europe iyo midda Argentine hadal heysay in Buffan uu ku biirayo Kooxda Boco Junionr ee dalka Argetine. Tababare Schelotto,ayaa hadda xaqiijiyay in ay xiriir la sameeyeen goolhayaha Talyaaniga,waxaana uu xaqiijiyay ...
Dagaalkii afka ee Mourinho iyo Conte oo dib u billowday,maxaa sababay?
Weerarka dhinaca Afka ah ee Tababarayaasha Italy iyo Portugal ayaa mar kale dib uga curtay horyaalka Dalka Ingiriiskka kaddib markii Tababaraha Chelsea uu ku faanay 100 kulan oo uu leyliyay Kooxda. Tababare Conte ayaa sheegay in 65 kulan oo ka mid ah 100 kulan oo uu leyliyay Chelsea uu guuleystay,islamarkaana uu rikoor wanaagsan ku heysto taas. Hadalkaas waxaa uu duray ...
Taageerayaasha Juventus iyo Napoli oo kulmay,maxey ka hadleen
Ka hor kulanka go’aamin doona cidda qaadeysa Scudetto dalka Italy waxaa kulan yeeshay taageerayaasha labada kooxood iyada oo ay jirto cabsi badan oo isku dhaca taageerayaasha ah. Kulanka labada taageerayaal ayaa ahaa mid ay uga hadlayeen sidii loo joojin lahaa ama looga hortagi lahaa waxa loo yaqaan qalalaasaha marka ay labada kooxood is wajahaan habeen dambe. Napoli waxaa ay booqaneysaa Magaalada ...
Ciyaartooy kala matalaya 14, dal oo caawa ku ciyaaraya Wanda Metropolitano
Garoonka Kooxda Kubadda Cagta ee Atletico Madrid ee Wanda Metropolitano,waxaa uu caawa marti gelinayaa kama dambeysta dartanka Koobka Boqorka Dalka Spain ee Copa Dele Rey. Kulankan,waxaa laga soo diiwaangeliyay in ay ciyaari doonaan ciyaartooy u kala dhashay 14 dal,waxaana hoggaanka u haya xulka France oo kalgiis 7 ciyaaryahan ku yeelanaya. Ciyaartooyda Reer France waxaa ka mid ah Samuel Umtiti, Ousmane Dembele iyo ...
Falanqeynta finalka: Copa del Rey, Barcelona vs Sevilla
Finalka Tartanka Copa del Rey ee dalka Spain ayaa dhacaya caawa waxaana Finalkiisa isugu soo baxay Koobkan kooxaha kala ah Barcelona iyo Sevilla. Ciyaartan waxaa ay ka dhaceysaa Garoonka Kooxda Atletico Madrid ee Wanda Metropolitana, ee Magaalada Madrid,taageerayaasha Barcelona ayaa doonaya in ay ku dabaal degaan Magaaladaas. Sevilla waxaa dhaawac ku seegaya Xiddigaha kala ah, Simon Kjaer iyo Sebastien Corchia,waxaana ay ku rajo ...
Manolas: “Messi waan celinnay,Salax ayaa dhiman”
Kostas Manolas, oo ka mid ah xiddigaha Kooxda Roma ayaa wali maankiisa ka saari la’ in Barcelona ay ka hartay tartanka Chmapions League,waliba ay reebtay Kooxdiisa Roma ee uu isaga ka mid yahay. Ciyaartooyda iyo Taageerayaasha ayuu ku boorriyay in howshii 1aad oo ay qabtaan ay ahayd joojintii Messi,shaqada labaad ee u taallana tahay in ay joojiyaan Maxamed Saalax oo ...
Falanqeynta: West Brom vs Liverpool, Yaa maqan, xiddigaha soo laabtay, isbeddelka Safka Liverpool ee Kulankan & Warar kale
Kulan xiiso badan oo ka tirsan horyaalka England, ayaa Galabta wuxuu garoonka Howthorns ku dhexmari doonaa, kooxaha Liverpool iyo West Brom, iyadoo labada kooxoodba ay heystaan Cadaadisyo. Kulanka: West Brom vs Liverpool Tartanka: Premier League Saacadda: 02:30pm Geeska Afrika West Brom ayaa filaneysa in koox kale oo xoog badan ay dhegta dhiigga u darto Toddobaadyo isxiga, xilli Liverpool ay kusoo ...